Iminyaka engu-100 ubuswa carbs nhlobo izimoto uphethiloli. Nge ukwethulwa izinhlelo injector umjovo lezi amadivaysi cishe saphela ezithuthukisiwe. Kodwa nge zokuthutha imoto izimboni zasekhaya abasaya izimoto carbureted. Futhi yize amavolumu ukukhiqizwa beye bancipha kakhulu kangakanani, aziyi kakhulu eside usebenza. Ngezinye izikhathi behluleka, futhi uma kukhandwe nezinto ezithile ezidingekayo "Solex" -karbyuratora.
eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa isici
Uma injini imoto ngeke ukuqala noma iphelela, kodwa ngokushesha anezinto, kungase kubangelwe yokuntuleka fuel ekamelweni iflothi. Futhi, ukubunjwa ingxube fuel kungenzeka kahle. Uma injini isezingeni iphelela kokungenzi lutho eziguquguqukayo ke kungase kube nezinkinga ezimbalwa.
Lokhu odla iziteshi lutho, ukwehluleka amaningi ekuqhubeni lo Solenoid valve noma control unit. Kungaphinde deform screw iraba uphawu izinga.
Uma uhlangabezana ongaphakeme noma okusezingeni eliphezulu kanzima isivinini idling, kungase kubangelwe yokulimala ukulawulwa noma ezingeni okungalungile kukaphethiloli ekamelweni. Ngaphezu kwalokho, ungase clog emoyeni noma fuel Jets. Kungenzeka futhi esimweni intuba olulinganiselwe binda. Kuyadingeka ukuba afeze usethe-up, futhi kwezinye izimo ukulungisa "Solex" -karbyuratora.
Bad motor ekuqaleni-up kanye ukusetshenziswa anda
Uma siqala ezimbi injini kubanda, kungase kube uphawu lokungabi kwenziwa ushintsho engalungile inhlamvu. Uma valve binda kancane ivaliwe, kungaholela Ukuwohloka ngokweqile inhlanganisela ezivuthayo. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kubangelwa ukungabi khona ukuqubuka Emakamelweni angaphakathi amakhosi amandla omlilo. valve okungafanele evulekile emva injini waqala, kuphumele kwandzisa ingxube, lapho injini "kokuziklinya".
Carburetor Vaz "Solex" kungadinga ukulungisa noma ukulungisa, uma kabi ukusebenzisa injini sekuqala ukufudumala. Lokhu kungase kube ngenxa yokuthi egumbini amandla omlilo uthola kakhulu ingxube ocebile, okuyinto kubangelwa amazinga aphezulu amafutha ezivuthayo ekamelweni iflothi. Isizathu salokhu - ukuhlukumeza of ukulungiswa noma ukungabi yobunzima of valve nophethiloli.
Uma imoto waqala ukudla ngophethiloli, kungase futhi kubangelwe yezizathu ezihlukahlukene. Futhi ngokuvamile nokugcinwa carburetor khulula. Ziningi izizathu okuyinto abashayeli bephoqeleka ukuba njalo ulungise indlela.
Indlela anakekele carburetor
Elements ezisetshenziswa njalo, ikakhulukazi angadingi yokuhlanza njalo. Isidingo salokhu inqubo singenzeka kuphela uma ongcolile ukuxhumana ezephula ukuhamba eminye imininingwane. It is uyabandakanyeka echibini uma ukulungisa ngeke "Solex" -karbyuratora.
Ifanele wokuhlanza kaphalafini noma amaminerali imimoya. uncono kakhulu futhi iyashelela ukusebenzisa le njongo amalungiselelo akhethekile. Abaningi babo futhi efanelekayo yokuhlanza ngempumelelo izingxenye sangaphakathi kudivayisi ngaphandle kwesidingo disassembly. Cabangela ukuthi ukungcola inveterate iziteshi kuyoba nzima kakhulu ukususa.
Ukuze yokuhlanza kuyadingeka ukukhipha ikhava bese lemifanekiso air isici ngokwayo, ukusula ingaphakathi langaphakathi indwangu elicwiliswe kaphalafini. Ngemva kokugeza, kungcono ukuvala emphinjeni isilonda ngendwangu ehlanzekile. ukufakwa alandelayo carburetor "Solex" emuva emotweni kungabangela ubunzima abanye Wabasaqalayo, ngakho udinga ukusebenza kahle.
Ezinye umonakalo zingaxazululwa ngisho ngaphandle kokuba ukususa carburetor. Kodwa kufanele kube okuhlanzekile, okuyinto okunzima kakhulu ukufeza ngaphansi hood. Ngaphezu kwalokho, idivayisi sensimbi sine inqwaba izingxenye ezincane - kulula kakhulu ukulahlekelwa. Uma une ukulungisa "Solex" -karbyuratora, ochwepheshe batusa hhayi ukuba engozini, futhi namanje kokuyikhipha injini.
Indlela lungisa izinga uphethiloli
Ngaphambi kokuqala inqubo yokusetha, kubalulekile ukuhlola yokuma yamabhola antantayo komunye nomunye futhi isihlobo odongeni ekamelweni iflothi. Le ndawo ekahle kakhulu ukuhlola ngokusebenzisa zeminwe kokuzalela ubuso ekhaveni gasket.
ngendlela efanele ye yamabhola antantayo - ncamashi maphakathi yezicathulo. Side evele akufanele ngokuqinile parallel izindonga ekamelweni. Ukuze ushintshe isikhundla izingxenye, udinga ngiphendukele kolunye okulungile abanikazi babo. Uma ngokungazelelwe babe umonakalo kumugqa, ungathola mikhondo entsha. Kuze kube yimanje, ubuso gasket embozwe samafutha angcolile, futhi ikhava icindezelwa ngokumelene izindlu we umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli.
Ikhava kufanele uthathe evundlile, le yamabhola antantayo baqondiswa phezulu. Ukuthela kobuso ulimi perpendicular eksisi ingalo valve inaliti. Uma kukhona ukwephulwa ke inkinga lula ukulungisa ngosizo impintshisi. Uma ebusweni lokuxhasa zikhubazekile, sintanta siqonde ekhishiwe futhi kuqondiswa. Uma umonakalo sibucayi, idinga ukushintshwa.
Ukulungisa izinga fuel, ikhava is nabokhulumile ukuze yamabhola antantayo kuthiwa wabheka phezulu, ngiyibeke phezu endaweni evundlile. Bulb damper kufanele njengoba lalihlehliswa e inaliti valve. Kubalulekile ukulawula nokusulwa - kufanele okufanayo futhi ulingana mayelana 0.25 mm. Uma kwenzeka sokusuka usebenzisa abanikazi podgibaniem kungase kushintshwe igebe.
Indlela hlola valve inaliti
Ukuze wenze lokhu, ukhipha ikhava. ngokuqapha Maximum ilimaze yamabhola antantayo, isivalo ubekwe endaweni evundlile. Ngokulandelayo, wagqoka obuphelele olufanelekayo hose. Ngemva kwalokho, njengoba moya toplivovozvratny lokuvala isici, udala cleaner e hose esebenzisa ipheya.
Kit carburetor "Solex"
Ezimweni eziningi, ukuba balungise okwanele impintshisi indlela. Kodwa kukhona okuningi umonakalo, lapho impintshisi ngeke kwanele. Lapho esikhundleni izingxenye ayatholakala ezitolo auto kits zihlanganisa zonke izingxenye ngokuvamile ngobugebengu carburetor.
Ngo yokulungisa Kit umshayeli ungathola Imibhobho esemzimbeni carburetor "Solex", dispensers, namafutha futha, gasket, entwasahlobo ukudansela isiginci sakhe zokuhlunga. Okunye okufakiwe ngempela valve inaliti lwezimpawu zenjoloba. Namuhla, omningi kwezimpahla mbumbulu. On the izimakethe yezimoto izingxenye eziningi China. Kufanele uqaphele kakhulu lapho ukhetha futhi ukuthenga izinto ezidingekayo ukuze lilungiswe.
Bonke labo abathenge Chinese ukulungisa ikhithi carburetor "Solex", bebengeneme kakhulu izinga izingxenye. Ngaphezu kwalokho, abazalwane Chinese kungukuthi njalo babikela ikhithi yikho konke okudingayo.
Indlela enye intwana?
Uma Kit uvele qualitative carburetor zezikhali futhi isilungele ukulungisa, isinyathelo sokuqala ukuba esikhundleni Imibhobho esemzimbeni obhekene supply iyunifomu uphethiloli ekamelweni amandla omlilo. Isipina Imibhobho esemzimbeni carburetor "Solex" izandla kangcono kwamandla. Khona-ke, umoya ushintsho izakhi.
Okokhelekayo Accelerator kungaba ze guquka. Kodwa ukuhlanzwa kunconywa. Kufanele futhi unake lemifanekiso nophethiloli - kufanele kahle wageza futhi nishaye air onomfutho. Ngokuvamile, i-elementi alivamile ukuzwakala laphinde labhidlika, ngakho lezi zenzo ngokwanele. In an icala ngokwedlulele, kungaba njalo esikhundleni. ukulungiswa ezincane ezinjalo (carburetor "Solex-21083" iyathinteka) zingenziwa ngezandla zakho siqu ngaphandle kwesidingo ukushaywa umoya iziteshi noma ochwepheshe.
Indlela ukukhetha Jets akho
Lokhu izingxenye ekhethekile, lapho kukhona amathuba Samandla. Ngalezi fuel alinganisiwe futhi emoyeni. Hlukanisa emkhatsini emoyeni nophethiloli Jets. Le mininingwane, ukudlula noma iyiphi enye, kuthinte iphango injini.
On the "Solex" Ukukhetha -karbyurator we Imibhobho esemzimbeni zingenziwa ngezandla zakho. isinyathelo esifanele sishintsha ukusebenza kwe-injini kwi bushelelezi futhi uzinzile. Kulokhu, ungakwazi futhi ulondoloze kufika ku-35% fuel emzini. Isinyathelo sokuqala ukukhetha amaseli fuel, bese ungakwazi ukuya ukukhethwa emoyeni. Lokubaluleke kakhulu e kokukhetha ivolumu yenjini. kunconywa ukusebenzisa Imibhobho esemzimbeni nge ingxenye encane engu- ephezulu ivolumu izinjini.
Ukuze ukukhetha esinembile futhi elungile, kukhona itafula ekhethekile, elibonisa isilinganiso engcono amafutha kanye emoyeni Jets. Futhi esivezwa ukuxubana nokuthi imoto ngeke baziphathe.
Kubalulekile kakhulu ukukhetha Jets, kodwa okubaluleke kakhulu ukuthenga kwabo. Uma ukuthenga Jets ku "Solex" -karbyurator, intengo kunengqondo (ruble 200), kodwa akulula ukuthola kukho efanelekayo. Kubalulekile ukwazi ukuthi yini yasisiza izibalo. Kaningi kuyenzeka ukuthi phezu izingxenye akusilo elilodwa, kodwa abizwa ezimbili. Ngokwesibonelo, izinombolo. Eyokuqala sifana ububanzi kanti eyesibili likhuluma ukusebenza. Ukuze emoyeni Jets izinombolo asho throughput.
Nge yesondlo efanele kanye nokulungiswa lamasu oyohlala isikhathi eside. Futhi uma usadinga ukushintshwa, khona-ke "Solex" intengo -karbyurator impela ezingabizi. Abanikazi kakhulu imoto, leli thuluzi kungadla kuze izinkulungwane ruble.
Ukuhlukana kokwanda kwesibindi - siyini isici sayo esikhethekile?